पुलिसले न्याय दिने की ? लाठी र बुट ? – कदर न्यूज अनलाईन डिजिटल पत्रिका : Oneline Digital Kadarnews:
पुलिसले न्याय दिने की ? लाठी र बुट ?
आउदा दिनहरुमा पुलिस प्रशासनले गल्ती गरेको ठाउँमा माफि मागोस्, पुलिसले सहि र गल्ति छुट्यायोस् र अनि मात्र लठ्ठीका प्रयोग गरोस् । नसक्नेलाई पद नदियोस् । त्यस्तै हिजो अस्ति मात्रै भैसेपाटीमा भएको घटनाले पनि पुलिस प्रशासनलाई घृणित बनाएको छ । एक भूतपूर्व जर्नेल हेम खत्रीले घरमा श्रीमती हुँदा पनि एक मधेशी महिला माला शाहलाई १८औं वर्षसम्म श्रीमती बनाई आज शाहलाई अलपत्र पारेर उनी सँग मेरो कुनै सबन्ध र नाता छैन भनेर टाढीन खाजेपछि उनीसहित महिला दिदीबहनी उनको घरमा मालालाई कानुनी न्याय माग्न गएको बेला हेम खत्रीले पुलिस प्रशासन बोलाएर ति महिलालाई बिनाकारण निर्मम लठ्ठी चार्ज गरी घाइते बनाउनुका साथै मानसिक रोगी समेत बनाएको छ ।
लेखक : – तिलकुमारी शर्मा (बस्याल)
नेपालमा पुलिसको अनुशासन भएन, राम्रो कामलाई हामीले पनि प्रोत्साहन गर्छौं । जहाँ दलालीकरण हुन्छ, जिस्किन्छन्, चेली वेटीका मजाक गर्छन इज्यतमाथि खेल्छन्, बलात्कारका सिकार बनाइन्छ त्यहाँ कारवाही हुँदैन । सुरक्षाको लागि हामी आफ्ना पुलिस खोज्दै हिड्नु
पर्छ । सहि गर्ने मन्छेलाई लाठी चार्ज ,गलत गर्नेलाई र बलात्कारीलाई रक्सी, मासु भात खुवाएर राखिन्छ । जहाँ भेट्यो त्यही दण्डी देखाउने र असभ्य बोल्ने कला काहीकतै पुलिसमा भेटिन आएको छ । त्यस ठाउँमा माथिबाट गल्ती गर्ने पुलिसलाई कारवाही होस् । जे गरे नि जे बोले नि हामी ठिकछौं भन्ने सोचलाई बदलेर परिवर्तन गरेर गलत ठाउँमा मात्र कारवाही गरोस् । द्धन्द्धकालमा दुख दिएका माओवादी र आर्मीको हर्कतलार्ई नबुझे झै गरी पुलिसहरुले बलात्कारीलाई लुकाएर निर्दोष युवाहरु पिटेकोछ । हरि आचार्यमाथि लाठी चार्ज गर्ने अवेविकलाई पुलिस प्रशासनले माथिबाट कारवाही गरोस् । हातको लट्ठी जनतालाई मात्र हो भन्ने पुलिस आफूले सही ठाउँमा कारवाही गरेको छ कि छैन हेर्दै जानु
छ । द्धन्द्धकालमा बलात्कारका सिकार बनाएर बस्नेलाई र बलात्कारीलाई सजाय नदिने पुलिसले हरि आचार्य जस्तो न्यायिक योद्धा माथि लाठी चार्ज गर्नु नै पुलिसको दलालीकरण हैन र ? बाटोमा हिड्दा कस्तो व्यवहार र कति अनुशासित बोल्दछन् त्यसको विवरण पुलिस हेडक्वाटरले राखेको छैन अहिलेसम्म । अहिले पोखरामा पुलिसले जे गर्यो सही गर्यो गुण्डालाई हेरेका छन् भने काठमाण्डौंमा पुलिस प्रशासनले नकाम गर्र्दैछ । यसमा हेडक्वाटर ले गल्ती गर्ने पुलिसलाई कारवाही गर्नु पर्छकी पर्दैन ? नत चेलीहरुको सुरक्षा छ , नत ज्यानको । दुर्योपतिजस्ता महिलाहरुको ईसारामा डिन चलेको छ । सक्कलीलाई नक्कली बनाएर अरुको नाम राख्छनकी भन्ने डर छ, त्यो पनि छानबिन गर्नुपर्ने छ ।
पुराना भएका कागजात लुकाउन सक्छन् । त्यहाँ गएर कारवाही गर्नु पर्र्यो । यहाँ सत्य र असत्य चिन्न सक्ने प्राध्यापक, डिनहरु र
कर्मचारीहरु मात्र विश्वविद्यालयमा राख्नुपर्छ ।
आउँदा दिनहरुमा युवाहरुमाथि कुनै कसुरबिना लाठी चार्ज गर्ने पुलिसलाई जागिरबाट निस्कासन गरियोस् । ती लाठी निर्दोष युवायुवतीमाथि हैन, बलात्कारी, शैक्षिक माफिया र कसैको इज्यतमाथि धावा बोल्नेका लागि होस् । पुलिसले शिक्षा सिकोस् को राम्रो को गलत भनेर ।
आफ्नो दिदीबहीनीको इज्यत नगर्ने दाजुभाइ आफन्तले राम्रो गर्नेलाई चिन्दैनन् र बलात्कारी र इज्यत नङ्याउनेलाई रक्सी, मासु भात खुवाएर हिडेकाछन् ? राम्रो, नराम्रो क्षमता हेर्ने छोरी, चेलीसँग पनि हुन्छ । राजनीतिको गोवरले घेरिएका आफन्त र दाजु भाइलाई यही हो चेतना ? दाजुभाइका ससुराली पक्षका आफन्तले पनि निर्दोष चेलीबेटीमाथि बदला लिएर तनाव बनाई जिउन दिएका छैनन् ।
आउदा दिनहरुमा पुलिस प्रशासनले गल्ती गरेको ठाउँमा माफि मागोस्, पुलिसले सहि र गल्ति छुट्यायोस् र अनि मात्र लठ्ठीका प्रयोग गरोस् । नसक्नेलाई पद नदियोस् ।
त्यस्तै हिजो अस्ति मात्रै भैसेपाटीमा भएको घटनाले पनि पुलिस प्रशासनलाई घृणित बनाएको छ । एक भूतपूर्व जर्नेल हेम खत्रीले घरमा श्रीमती हुँदा पनि एक मधेशी महिला माला शाहलाई १८औं वर्षसम्म श्रीमती बनाई आज शाहलाई अलपत्र पारेर उनी सँग मेरो कुनै सबन्ध र नाता छैन भनेर टाढीन खाजेपछि उनीसहित महिला दिदीबहनी उनको घरमा मालालाई कानुनी न्याय माग्न गएको बेला हेम खत्रीले पुलिस प्रशासन बोलाएर ति महिलालाई बिनाकारण निर्मम लठ्ठी चार्ज गरी घाइते बनाउनुका साथै मानसिक रोगी समेत बनाएको छ । त्यसैमा महिलाकर्मी भित्रकी एक जना बच्चा काखमा च्यापेर हिड्दै गरेकी हेमा श्रेष्ठलाई असई भन्ने प्रहरीले उनलार्ई लाठ्ठीले कुट्दै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा बाहिरीए पछि झन पुलिसप्रति बृतिष्णा जागेर आएको छ मानिसमा । हेमा श्रेष्ठ सहितको महिला अधिकारवादी कर्मी भूतपूर्व सेनाका जर्नेल हेम खत्रीको घरमा माला शाहलाई न्यान माग्न गएको बेला उल्टै लाठ्ठी र अभद्र व्यवहार सहनु परेपछि न्याय दिने पुलिस नै यौन शोषणका साथै मानसिक यातना दिएर छोड्ने अभियुक्तको पक्षमा उभिएपछि कसरी पाउन सोझासाझा जनताले न्याय ? त्यसैले ठूलो र उच्च तहका मान्छेलाई मात्र पालिएको पुलिस प्रशासन हो की, गरिब दुखी र अन्यायमा परेका मान्छेलाई न्याय दिलाउने पुलिस प्रशासन हो भनिदिनुपर्यो सम्बन्धित निकायले १ हैन भने न्याय माग्न गएकालाई कानुनी रुपमा गएर न्याय दिनुको सट्टा लाठ्ठी र बुट बर्साउन पाईन्छ ?
पुलिस भनेको अन्यायमा परेकालाई न्याय दिने र राज्य, समाजमा भएका र हुने गरेका विकृति, विसंगति, गुण्डागर्दी तथा समग्र सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सुरक्षा निकाय हो । तर आज त्यो निकायले त्यसो नगरेर उच्च पदस्थ र अन्य आफ्ना आसेपासेको रोवहरमा र उच्काहडमा सोझासाझा र निमुखा जनतामाथि लाठी र बुड बर्साउदै हिडेको छ । यसमा पुलिस प्रशासनको लापरवाही भनौ की, पुलिस स्वयम आफै जिम्मेवारी भनौ की या सरकारको रबैया नै यस्तै हो यो जवाफ गृहमन्त्री वा प्रहरी प्रमुखले सोच्नु पर्ने कुरा हो । जनताको करबाट आफु र परिवारको पेट पालेर देशको सुरक्षार्थ खटिएका सबै प्रहरीलाई मुझ्न भने चाहन्न ।
बिनाकारण आरआर क्याम्पस अगाडी लाठी चार्ज गरेर त्रिविका बिद्यार्थी हरि आचार्य र एउटा महिलाको न्यायका लागि अधिकार र न्याय माग्न गएका महिलाअधिकारकर्मी मध्यकी हेमा श्रेष्ठमाथि निर्मतापूर्वक लाठी चार्ज भई बिरामी बनाइएकाले त्यसको छानबिन गर्नुका साथै दोषीमाथि हदै सम्मको कारवाही र बिरामीलाई राज्यबाट निशुल्क उपचार गरियोस् भन्न चाहन्छु ।
पुलिस भनेको अन्यायमा परेकालाई न्याय दिने र राज्य, समाजमा भएका र हुने गरेका विकृति, विसंगति, गुण्डागर्दी तथा समग्र सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सुरक्षा निकाय हो । तर आज त्यो निकायले त्यसो नगरेर उच्च पदस्थ र अन्य आफ्ना आसेपासेको रोवहरमा र उच्काहडमा सोझासाझा र निमुखा जनतामाथि लाठी र बुड बर्साउदै हिडेको छ । यसमा पुलिस प्रशासनको लापरवाही भनौ की, पुलिस स्वयम आफै जिम्मेवारी भनौ की या सरकारको रबैया नै यस्तै हो यो जवाफ गृहमन्त्री वा प्रहरी प्रमुखले सोच्नु पर्ने कुरा हो । जनताको करबाट आफु र परिवारको पेट पालेर देशको सुरक्षार्थ खटिएका सबै प्रहरीलाई मुझ्न भने चाहन्न । तर पनि एकजना प्रहरीले गल्ती गरे पूरैप्रहरी प्रशासनको नाम जाने भएकाले यसमा सजग र सर्तकता अपनाउन मेरो पुलिस दाजुभाई अनुुरोध पनि छ । त्यस्तै एकदुई जना तल्लो तहका आर्मी जवानले गरेको गल्तीलाई मुछेर समग्र आर्मीलाई प्रशासनलाई दोेष नगएर जसले गल्ती गर्छ त्यसलाई मात्र कारवाही को भागीदार होस भन्न चाहन्छु ।
लिभिङ टुगेदर : सम्बन्धमा दरार आएपछि प्रेमीले प्रेमिका नै चिन्दैनन्
प्रकासित : १० आश्विन २०७८, आईतवार
Woman Figure is Seen as Subject of Sex and Hysteria by Patriarchy
प्रकासित : २ आश्विन २०७८, शनिबार